Kubanjwe inkunzi abosizo lokuqala e-PE | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 14:51
Kubanjwe inkunzi abosizo lokuqala e-PE
Port Elizabeth – Kubanjwe inkunzi abezimo eziphuthumayo ngesikhathi behambele isiguli ePort Elizabeth, kusho okhulumela abosizo lokuqala ngeSonto.
USizwe Kupelo we-EMS uthe abosizo lokuqala bebehambele isiguli kuHope Street maphakathi nePort Elizabeth ngesikhathi bebanjwa inkunzi.
"Bebehambele isiguli ebesiphethwe yikhanda elinzima. Laba bebesamatasa besiza isiguli ngemuva kwi-ambulensi ngesikhathi amadoda angu-8 evula i-ambulensi ngaphambili. Omunye wabosizo lokuqala uwabuzile ukuthi enzani abe esehlakazeka."
OLUNYE UDABA:Kubanjwe inkunzi abosizo lokuqala behamba nesiguli eGoli
UKupelo uthe abosizo lokuqala baqeda ukulapha isiguli babona ukuthi sekunempahla yabo esilahlekile.
"Kwanyamalala amaselula abo nenye imaphla. Okwenzekile akuvumelekile. Uma kuqhubeka kuzofanele silinde amaphoyisa ukuze ezosiphelezele ngaphambi kokuba kukhishwe i-ambulensi. Uma sekufanele silinde amaphoyisa, kwazi bani ukuthi sizowalinda isikhathi esingakanani.
Amaphoyisa awatholakalanga ephawula ngesigameko.
Kalk Bay 14:22 PM